सनराइज ब्लूचिप फण्डको ८ करोड ५० लाख इकाई विक्री खुला | Artha News Nepal
Home	लगानि	सनराइज ब्लूचिप फण्डको ८ करोड ५० लाख इकाई विक्री खुला
काठमाडौं । सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले आज (आइतवार)देखि सनराइज ब्लूचिप फण्डको इकाई विक्री खुला गर्ने भएको छ ।
उक्त कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने यो फण्ड सञ्चालनका लागि रू. १ खर्ब बराबरको १० करोड इकाई विक्री गर्न लागेको हो । कुल इकाईमध्ये कोष प्रबर्द्धक सनराइज बैंकलाई १५ प्रतिशतका दरले १ करोड ५० लाख इकाई सुरक्षित राखी बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागिएको हो ।
प्रतिइकाई मूल्य रू. १० रहेको यो इकाई खरीदका लागि छिटोमा चैत ४ र ढिलोमा चैत १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन दिँदा न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम १ करोड कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले १० वर्षमा परिपक्व हुने गरी बन्दमुखी योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो । इकाई बाँडफाँट भएको मितिले १० वर्षपछि योजनाको लगानीलाई नगदमा परिणत गरी इकाईधनीहरुलाई समानुपातिक हिसाबले प्रचलित कानून बमोजिम वितरण गरिने कम्पनीले बताएको छ ।
यस योजनाका इकाईहरु धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराई कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था पनि कम्पनीले गर्नेछ ।
इकाई विक्री प्रबन्धकमा पनि सनराइज क्यापिटलनै रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै इकाई खरीदका लागि आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । साथै, मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
mutual fundविक्रीसनराइजसनराइज ब्लूचिप फण्ड